ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသို
ⓘ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွ ..
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဒီပလိုမာ၊ ဘွဲ့လွန်နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့များအတွက် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေသည်။ ဤတက္ကသိုလ်တွင် ဆရာဝန်များ၊ သွားဆရာဝန်များ ၊ သူနာပြုများ ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ စသည့် ဆေးပညာနှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များမှ အောင်မြင်ပြီးစီးထားသူများ တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရှိသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် အစိုးရဝန်ထမ်း ဆရာဝန်များ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ ဤတက္ကသိုလ်သည် မြန်မာ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ရှိသည်။
ဤတက္ကသိုလ်သည် South-East Asia Public Health Education Institution Network SEAPHEIN၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်။